कोभिड–१९ ले महिलाहरूमा पारेको प्रभाव - NepaliEkta
10 October 2020 12 October 2020 Nepaliekta	0 Comments
4484 जनाले पढ्नु भयो ।
(२०७७ आश्विन २४ गते अखिल नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष मीना पुनद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)
यति बेला विश्व कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा छ । आजभन्दा १० महिनाअगाडि डिसेम्बर ३१, २०१९ मा चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्वभर दशौँ लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने विश्वका सबै देशमा कुनैनकुनै रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ ।
यो विश्वव्यापी महामारीबाट सबैभन्दा बढी अमेरिकाका जनता प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार त्यहाँ ७८ लाख ३१ हजार ३५५ जनामा सङ्क्रमण भइसकेको छ भने २ लाख १७ हजारभन्दा बढी जनाको ज्यान गएको छ । दोस्रो बढी प्रभावित देश भारत हो । भारतमा ६९ लाख ३ हजार ८०६ जना सङ्क्रमित भएका छन् भने १ लाख ६ हजार ५५४ को मृत्यु भइसकेको छ । तेस्रोमा ब्राजिल छ । त्यहाँ ५० लाख २९ हजार ५३९ जना सङ्क्रमित भएका छन् भने १ लाख ४९ हजार ३४ ले ज्यान गुमाएका छन् ।
कोरोनाको सुरुवात भएको देश चीन अहिले सामान्य अवस्थामा पुगिसकेको छ । डिसेम्बरदेखि यता ८५ हजार दुई सय २१ सङ्क्रमित भएको चीनमा जम्मा ४ हजार ६ सय ३४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । कोरोनाबाट सबैभन्दा पहिला सङ्क्रमित चीन अहिले सामान्य अवस्थामा आइरहनुको खास कारण चीनले अपनाएको सावधानी र सङ्क्रमितको सही ढङ्गले गरेको व्यवस्थापन कारण हो । अमेरिकालगायत युरोपका कैयौँ मुलुकले यसलाई सुरुमा सामान्य रूपमा लिए; र, कुनै सावधानी नअपनाएका कारण ती मुलुक अहिले पनि उच्च जोखिममा नै छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कोरोना सङ्क्रमणको कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि देशैभर करिब ६ महिना लामो बन्दाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो, जसको कारण लाखाँंले रोजागरी गुमाउनुपर्याे । उद्योगधन्दा, व्यापार, शैक्षिकक्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र वर्षौं माथि उठ्न नसक्ने गरी थला परेका छन् । अहिले पहिलाजस्ता बन्दाबन्दीको अवस्था नभए पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भर्ने बढिरहेको छ । नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आजसम्म कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या करिब १ लाख छन् भने ५ सय ९० जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपाल र विश्वभर महिलामा सङ्क्रमणको अवस्थाबारे ठोस तथ्याङ्क नभए पनि महिलामा सङ्क्रमण र मृत्युको प्रतिशत कम नै रहेको समाचार बाहिर आएका छन् । हामीले यो कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट आम नेपाली महिलाले के कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको छ भन्ने नै हो, जसलाई निम्नानुसार बुँदामा छलफल गर्ने छौँ ।
१. बलात्कारमा बढोत्तरी
पछिल्लो समयमा उपत्यकालगायत देशका विभिन्न जिल्लामा महिलामाथि सामूहिक बलात्कार, बलात्कारपछि हत्याका घटना धेरै नै बढिरहेको छ ।
गत हप्ता एक १७ वर्षीय युवतीलाई भक्तपुरमा रोकिराखेको बसमा बन्धक बनाई बसका चालक र सहचालकले सामूहिक बलात्कार गरेको घटना बाहिर आएको छ । युवतीलाई काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरसम्म एक अपरिचित केटा (दिपेश राई) ले लगेको थियो । पानीमा लठ्याउने औषधि मिसाएर खुवाई भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रोकिराखेको बसभित्र लगेर बेहोस अवस्थाकी युवतीलाई रातभरि बलात्कार गरेको र भोलिपल्ट बिहान ती दुई युवालाई जिम्मा लगाई आफू भागेको समाचार बाहिर आएको छ ।
बझाङ बङ्गुल नगरपालिकाकी २१ वर्षीय युवतीलाई उपचार गर्ने निहुँमा भारतमा लगी उनकै श्रीमानको मिलेमतोमा उनका ससुरा, काकाससुरा, नन्देभाइले पटक–पटक बलात्कार गरेको र उनीहरूले नै पैसा लिएर परपुरुषसँग पटक–पटक यौनसम्बन्ध राख्न बाध्य पारेको भनी पीडित युवतीले विभिन्न जनप्रतिनिधिसँग भनेको कुरा मिडियामा आइरहेको छ । अहिले उनी त्यही कारण शारीरिक, मानसिक रूपमा विक्षिप्त छिन् र बझाङ जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी छिन् ।
सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका–७ की १७ वर्षीय युवती सङ्गीता मण्डललाई आफ्नै खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा त्यहीँका युवाहरूले सामूहिक बलात्कार गरे । पीडित युवतीले यसको विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिन चाहेकी थिइन्; तर छिमेकी कथित पञ्चायतले उजुरी दिन रोकी पैसामा मेलमिलाप गर्ने निर्णय गरिदियो । यस प्रकारको दबाबमूलक निर्णय उनलाई चित्त बुझेन र त्यही राती नै आफ्नै घरमा आत्महत्या गरिन् ।
बझाङ मष्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।
माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । समाजमा यस्ता हजारौँ घटना भइरहेका छन् । प्रहरीको सूचनानुसार पनि दैनिक ६ देखि ७ जना महिला तथा बालिका बलात्कार भएका छन् । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण गत चैत्रदेखि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । यही अवधि चैत्रदेखि अहिलेसम्म देशभरमा १२ सय २१ बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यी त प्रहरीकहाँ दर्ता भएका घटना मात्र हुन् । डर, धम्की, दबाब, प्रलोभन, मेलमिलापको नाममा पुलिससम्म पुग्नै नपाएका बलात्कारका घटना त अहिले पनि छिपाइएको छ ।
यसरी देशमा बढिरहेका महिला, बालबालिकामाथिको बलात्कार, हत्याहिंसाका घटना सामान्य र व्यक्तिगत घटना होइनन्, यो त सिङ्गो मुलुकको चिन्ता र लज्जाको विषय हो । महिला, बालबालिकामाथि यति धेरै बलात्कारका घटना भइरहनुका पछाडिको कारण के हो ? त्यसबारेमा सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
महिला र बालिका बलात्कार विरुद्धको कानुनलाई मुलुकी अपराध संहिता लागु भइसकेपछि थप कडा बनाइएको छ । १० वर्षभन्दा कम उमेर भएको, पूर्ण असक्त, अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा जन्मकैदको सजायको व्यवस्था छ । योबाहेक पीडितको उमेरको आधारमा ७ देखि २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
कानुन नभएर अपराध बढेको भन्न नमिल्ला, बरु हाम्रो सामाजिक अवस्था कति बिग्रिएको छ ? त्यसबारेमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
समाजमा बारम्बार दोहोरिने यस प्रकारको घटनाहरूको बारेमा सरकारले दुई वटा विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ :
१. घटना घट्नुको अपराधिक मानसिकता, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय सबै हिसाबले अध्ययन गर्ने, यसका कारण पत्ता लगाउने, जनचेतना जगाउने र समाधानको उपाय खोज्ने ।
२. विद्यमान कानुनलाई थप कडा बनाउने, कानुनको कठोर कार्यान्वयन गराउने ।
घटनाको अनुसन्धान पद्धति, त्यसको प्रभावकारिता, छिटोछरितो न्याय—यी सबैमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा मुख्य विचारणीय कुरा यो छ, अहिलेको प्रचलित प्रहरी–प्रशासन वा न्यायप्रणालीद्वारा महिलामाथि हुने पारिवारिक हिंसा, बलात्कार वा हत्यासमेतका घटनामा पीडित महिलाले समयमा नै न्याय पाउन सक्दैनन् । त्यसकारण अहिलेको यो प्रणालीमा नै सुधारको आवश्यकता छ ।
महिलामाथि हुने त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारवाहीमा शीघ्र न्यायोचित कारबाहीका लागि बेग्लै पारिवारिक अदालत वा ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रकारको कुनै व्यवस्था गरिनु नितान्त अवाश्यक भएका छ । त्यसबारे अर्थात् महिलामाथि हुने हिंसा तथा शीघ्र न्यायोचित कारवाहीबारे सरकार, राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था सबै गम्भीर बन्नुपर्दछ ।
महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार वा हत्याबारे प्रभावशाली कारबाही गर्न विद्यमान प्रहरी–प्रशासन वा न्यायप्रणाली कति अफल भइसकेको छ ? त्यो कुरा निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकारणबाट पनि प्रष्ट हुने छ । त्यो सिलसिलालाई हामीले ब्रेक लगाउनैपर्दछ र त्यसका लागि खालि महिला मात्र होइन, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता अगाडि आउनुपर्दछ ।
२. बढ्दो महिला हिंसा
महिलामाथिको घरेलु हिंसा रोकिएको छैन । यो समयमा विश्वव्यापी रूपमा नै महिला हिंसा बढिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । नेपालमा पनि रोकिएको छैन; बरु विगतको तुलनामा झन् बढिरहेको छ । गाली, बेइज्जती, कुटपिट, घरनिकाला, चरित्रहत्या, बोक्सीको नाममा दुव्र्यवहार, बेइज्जती, दाइजो नलिएको वा कम लिएको, छोरी छोरी जन्माएको, सन्तान नजन्माएकोलगायतका विषयलाई लिएर महिलामाथि विगतदेखि नै बर्बर हिंसा भइरहेका छन् । यस बन्दाबन्दी समयमा झन् बढेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा बढी हिंसा घरभित्रैबाट र आफन्त चिनेजानेकाबाट नै हुने गरेका छन् ।
गत हप्ता सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका–४ को २८ वर्षीय रन्जनादेवी झा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफ्ना पति र सासु विरुद्ध उजुरी दिन आएकी थिइन् । तीन छोरीछोरी जन्माएका कारण श्रीमान र सासुले पटक–पटक मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेकाले न्यायका लागि उनले उजुरी दिन चाहेकी थिइन् । तर त्यहाँ उजुरी नलिई घरनजिकको प्रहरीचौकीमा जान भनी फर्काइयो ।
२०७७ भाद्र १९ गते सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका–५ कसुन्डीकी ४५ वर्षीय मूर्तिदेवी यादवलाई कथित बोक्सीको आरोपमा छिमेकीले मान्छेको मलमूत्र खुवाउने कुटपिट गर्ने, लछारपछार गर्नेजस्ता क्रुर यातना दिएर गम्भीर घाइते बनाएको र उनी अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराइरहेको घटना बाहिर आएको छ ।
पर्सा जिल्लाको छिपरहमाई गाउँपालिका–३ कि ४५ वर्षीय एकल महिला उमादेवी ठाकुरलाई उनको देवर, गाउँका अन्य मानिस र एक जनप्रतिनिधि मिली चरित्रहीन र बोक्सीको आरोपमा कपाल काटिदिए; कालोमोसो दलेर र कुटपिट गर्दै अर्धनग्न अवस्थामा गाउँ घुमाएको घटना विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेका छन् ।
यस्ता घटनाले हाम्रो समाजमा महिलामाथि कति निच र बर्बर हिंसा भइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई बताउँछ । यस्ता घटना पुरुषप्रधान समाजका उपज हुन् । यसलाई हामीले खाली एउटा महिलामाथि भएको व्यक्तिगत घटनाको रूपमा हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । त्यस्ता घटना गम्भीर प्रकारका सामाजिक समस्या हुन् र सिङ्गो मुलुकको समस्या पनि हो । त्यसकारण यस्ता बर्बर घटनाप्रति सरकार, मानवअधिकारकर्मीलगायत सबैको गम्भीर ध्यान जानुपर्दछ ।
बोक्सीलगायतका महिला हिंसा विरुद्धका कानुन भएता पनि त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा कैयौँ प्रकारका समस्या देखिएका छन् । त्यसकारण दोषीलाई कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
३. गर्भवती र सुत्केरी महिलामा प्रभाव
कोरोना सङ्क्रमणले भएको बन्दाबन्दीका कारण सुत्केरी, गर्भवती र साना बच्चाका आमाहरू धेरै समस्यामा परेका छन् । अस्पतालको सेवासुविधा, औषधि, पोषणयुक्त खानालगायतबाट उनीहरू बञ्चित भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको डरले गर्दा धेरै गर्भवती महिला सुत्केरी हुन अस्पताल गएनन् । यसले गर्दा एकातिर, अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिलाको दर घटेको छ भने अर्कोतर्फ, घरैमा सुत्केरी हुँदा दर्जनौँ सुत्केरीको मृत्यु भएको छ ।
अस्पताल जाने गाडी समयमा नपाउँदा ढिला हुन गई अकालमै मृत्यु भएका घटना धेरै छन् । स्वास्थ्यसेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार लकडाउनको पाँच महिना अवधिमा ७३ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ । त्यसमध्ये ६० जनाको मृत्यु समयमा अस्पताल पुग्न नसक्नुका कारण भएको छ भने कति गर्भवती महिलालाई कोरोनाको कारण देखाउँदै निजी अस्पतालले भर्ना नलिँदा र समयमा उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार यसलाई अत्यावश्यक सेवा भनिएको छ तर गर्भवती, सुत्केरी महिलाले त्यो सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा ज्यानै गएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा अङ्गिकार गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ लागु भइसकेको भएतापनि अहिलेको जटिल अवस्थामा कैयौँ महिलाले त्यो अधिकार उपयोग गर्न पाएनन् ।
एक तथ्याङ्कअनुसार हरेक वर्ष १० लाखभन्दा बढी महिला गर्भवती हुन्छन् भने हरेक वर्ष ३ लाखभन्दा बढी महिलाले गर्भपतन गराउँछन् । अहिले सङ्क्रमणको डर र बन्दाबन्दीको कारण समयमा गर्भपतन गराउन नपाउँदा अनिच्छित गर्भ रहेकाको सङ्ख्या बढेको छ । १२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको इच्छामा गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्थाले २०५९ सालदेखि नै मान्यता प्राप्त गरेको छ । देशका ७७ जिल्लाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने व्यवस्था भए पनि अहिलेको जटिल अवस्थामा निश्चित समयभित्र त्यो सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा अनिच्छित गर्भवतीको सङ्ख्या बढेको हो ।
त्यसैगरी, साना बच्चालाई दिइने विभिन्न प्रकारका भिटामिन र सुई पनि उनीहरूलाई निश्चित समयमा दिन नसक्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका समस्या आउन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । त्यसकारण यी समस्यालाई महिलाको मात्र समस्याको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यस्ता समस्याले सिङ्गो मुलुकलाई नै असर गर्दछ ।
४. घरेलु कामको भार
घरेलु काम महिलाले मात्र गर्नुपर्दछ भन्ने परम्परागत सोचाइ र व्यवहारबाट हाम्रो समाज अहिले पनि माथि उठ्न सकेको छैन । बच्चाको स्याहारसम्भार, वृद्धको हेरचाह सरसफाइदेखि सम्पूर्ण घरेलु कार्य महिलाले गर्नुपर्दछ । तर यस्ता कार्यलाई श्रमको रूपमा लिइँदैन । त्यसकारण महिलाले बिना पारिश्रमिक अनुत्पादक कार्यमा जीवनभरि लागिरहनुपर्दछ । यस प्रकारको कामले गर्दा उनीहरूले समाज र देशको विकासमा योगदान दिन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ, आफ्नो व्यक्तिगत विकास पनि कुण्ठित भएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण र देशमा भएको बन्दाबन्दीको कारण अहिले यस्ता कार्य अझ थपिएका छन् । स्कुल जाने बच्चा घरमा छन् ।
लकारखाना, कार्यालय जाने सबै मानिस पनि दिनभरि घरमा बस्ने भएकाले उनीहरूलाई कामको बोझ अरू थपिएको हो ।
अन्तमा, विगत ७ महिनादेखि आम नेपालीले कोभिड–१९ रोगका साथै अन्य स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका समस्यास“ग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यस प्र्रकारको अवस्थासँग हामीहरू कहिलेसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ र कहिले यसको अन्त हुन्छ भन्नेबारेमा अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि अहिले नै कुनै ठोस आधार पनि बनिसकेको छैन ।
यस प्रकारको जटिल अवस्थाको विरुद्ध सिङ्गै मानव समुदाय जुधिरहेको अवस्थामा पनि महिलाले भने महिला भएकै कारण महिलाजन्य समस्याको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।
← क्रान्तिका कथाहरु
कोभिड संक्रमणको मारमा सबैभन्दा बढी महिला : दुर्गा पौडेल →